Archive du 20180913
Ravalo, Rajoelina, Rajao Hifanenjana amin’ny fifidianana
Tsy ho feno 100% mihitsy ny fepetra hisian’ny fitoniana. Ny adilahy politika hisy foana ary tsy misy ho afa-po. Izany ve no tsy hanatanterahana fifidianana ka dia hiditra tetezamita indray ?
Paul Rabary Hanafoana ny fampiasana taratasy
Rehefa avy nanao fidinana ifotony tamin’ny soavalivy nitety faritra dia nanatontosa fihaonana tamin’ireo tanoran’Antananarivo tetsy amin’ny Dome RTA Ankorondrano omaly ny kandida Paul Rabary.
Fikambanana FITAFI “Mila filoham-pirenena fantatra mason-tsivana isika.”
Natomboka ny talata teo tetsy Andrefanambohijanahary ny hetsika fanentanan-dry zareo avy eo anivon’ny FIkambanan’ny TAnora FIlamatra mandray andraikitra (FITAFI).
Kandida hibata 1% sy 2% Adivarotra politika no ho betsaka
Maro amin’ireo kandida ho filoham-pirenena no efa fantatra fa tsy hahazo mihoatra ny 1 na 2% amin’ny fifidianana. Raha hevitra dia manana tokoa fa raha ny hoenti-manana dia tsy mitovy ny herijika noho ny volabe miasa sy mihodina ao anatin’ny fifidianana.
Fifamindram-pahefana Latsa-dranomaso Rajaonarimampianina
Vita omaly teny Iavoloha ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filoha nametra-pialana Hery Rajaonarimampianina sy Rivo Rakotovao filoham-panjakana vonjimaika.
Distrikan’Ambohidratrimo Tafatsangana ny fikambanan’ny Ben’ny tanàna manohana an-dRavalomanana
Tafatsangana omaly alarobia 12 septambra teny Ivato ny fikambanan’ny Ben’ny tanàna manohana ny kandida laharana faha-25 Ravalomanana Marc.
Dinika Fanavotam-Pirenena « Aza mifanome tsiny intsony ! »
Nampahatsiahy ny zava-bitany nanomboka ny taona 2016, izay niforonany, ka hatramin’izao tetsy amin’ny Bon accueil Ambatonakanga omaly ny avy eo anivon’ny vovonana politika Dinika Fanavotam-Pirenena (DFP) izay tarihin’i Tolojanahary Maharavo na Doudou.
Serge Zafimahova “Be loatra ny hetra alain`ny fanjakana amin’ny solika”
Mitaraina amin`ny fiakaran`ny vidin-tsolika avokoa ny eto Madagasikara,
Fanemorana fifidianana Teti-dratsy hananganana tetezamita
Laharana faha-24 i Senegal ary faha-107 i Madagasikara, araka ny navoakan’ny FIFA tamin’ity taona 2018 ity teo amin’ny baolina kitra.
TIM Moramanga Miomana fatratra hampandany an’i Dada
Mihetsiketsika fatratra ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) manerana ny nosy amin’ny fiomanana amin’ny fifidianana, anisan’izany ny TIM ao Moramanga.
Fiainam-pirenena Lalaovin`ny mpanao politika ny lalàna eto Madagasikara
Mifamahofaho ny toedraharaham-pirenena eto amintsika, indrindra amin`ny fampiharana sy fanajana ny lalàna velona.
CRAAD-OI sy Fikambanana TANY Mangataka ny tsy hanekena ny ZES
Fanariana an-tsitrapo ny fiandrianam-pirenena ny lalàna momba ny Faritra Ekonomika Manokana (ZES),
UPF Madagascar Miatrika atrikasa iantohana ny fifidianana ireo mpanao gazety
Ratsy toerana aty Afrika eo amin`ny tomban`ezaka ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara noho ny tsy fisian`ny fiarovana ity asa ity eto amintsika.
Mandratra ny marina
Tsy marina kosa ary ve fa misy ary maro amin’ny mpanao politika, mpitondra fanjakana ary kandida no mihevitra ny Malagasy ho dondrona ?
Fandaminana ny fifamoivoizana Nosokafana ny lalana Petite Vitesse
Nosokafan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra nanomboka ny talata 11 septambra 2018 ny lalana Rainibetsimisaraka manoloana ny Petite Vitesse rehefa nihidy tsy azon’ny fiarakodia nampiasaina nandritra ny efa-bolana.
Taksi eto Antananarivo Mbola ezaka be ny fanaraha-maso ireo tsy ara-dalàna
Hanatanteraka fihaonambe etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano ireo fiarakaretsaka miasa sy mivelona eto Antananarivo anio alakamisy 13 desambra.
Tetikasa Miz’art Hampiroborobo ny zava-kanto ho an’ny olona rehetra
Nampahafantarina omaly alarobia 12 septambra tetsy amin’ny Art’s Galerie Ampasanimalo ny fisian’ny tetikasa miz’art ataon’ny fikambanan’ny mpanakanto mivondrona ao amin’ny La Teinturerie.
Festival SORIBA Hetsika hampahafantarana ny Faritra Vatovavy Fitovinany
Hotanterahina manomboka rahampitso 14 septambra any amin’ny distrikan’Ikongo ilay hetsika ara-kolontsaina “Festival Soriba”, tohanan’ny minisiteran’ny fizahantany.
Valabetokana-Faratsiho Mandry tsy lavoloha ny mponina
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana any amin’ny Kaominina Valabetokana, Distrikan’i Faratsiho, Faritra Vakinankaratra.
Fanafihana mpanao « mobile money » Zanaka mpitandro ny filaminana ny iray tamin’ireo jiolahy
Ela nitoratorahana ireto tovolahy roa mpanao fanafihana mitam-piadiana ireo tranoheva mpivarotra fahana sy mpanao “mobile money” ka voasambotra ihany.
Maty tsy tsa-drano ny tovolahyiraytokony ho 20 taonaizaynitaingina moto tetsyamin’nylalana Digue omalymaraina.
Andranomanalina sy Isotry Diovina ny lakandranon’Andriambeloma
Naharitra efa-bolana teo ny asa fanadiovana sy ny fanamboarana ireo lakandrano manary ny rano maloto hivarina any amin’ny lakandrano na « canal »
Vidin-tsolika Mety mbola hitombo 400 ariary
Niakatra 50 ariary nanomboka omaly ny vidin’ny solika eto Madagasikara.
Faritra arovana eto Madagasikara Misy hatrany ny tsindry amin’ireo mpiasa
Nisy ny fanaovan-tsonia fanamafisam-piaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana, ny fitantanana ankapoben’ny ala ary ireo mpiara-miombon’antoka dia ny fikambanana Fanamby sy Madagascar National Parks (MNP) omaly alarobia 12 septambra.
Tsiperifery eto Madagasikara Mampidi-bola betsaka
I Madagasikara irery no manana tsiperifery ary tena mampidi-bola ny fanondranana azy satria mahatratra 200 Euros na 803 000 Ar hatramin’ny 350 Euro na 1 405 000 Ar ny kilao ividianan’ny firenena eoropeanina azy (1Euro=4015Ar).
Fampandrosoana an’i Madagasikara Misy ny mason-tsivana tokony ho fantatra
Maro ny fanehoan-kevitra ataon’ny olona, indrindra ireo kandida milatsaka, amin’izao ankatoky ny fifidianana izao.